Muslinkow, ku noqda dhulkiinnii!
Tuesday 17th November 2020 11:55:37 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Muslinkiinna Faransiis, Beljim, Ingiriis, Jarmal iyo Yurub oo dhan iyo Maraykan jooga
Muslinkiinna Faransiis, Beljim, Ingiriis, Jarmal iyo Yurub oo dhan iyo Maraykan jooga , waannu idinku daalnay ee alaabtiinna gurta oo na dhaafa, oo ku noqda halkii aad ka timaaddeen. Taga oo sii qaata madrasadihiinna diinta, la ga yaabee in aad waxbarashadayada calmaaniga ah ku daasheene, lana taga fikirkiinna dalalkiinnii baa u baahane. Sii rujista waxii aad beerteen, haddiiba aad wax beerteen, qorraxda kulul ee dhulalkiinna ayaa hoos idiinka baahane.
Na ga guura hawadayadu idiin ma habboona, cimiladayaduna waa qabow, ceeryaantayaduna waa mid nafta u darane. Ku noqda dalalkiinnii cadceeddu dhalaalaysay, lamadegaankiinnii ballaadhnaa, dooxooyinkiinnii cagaarnaa, dhul daaqsimeedkiinnii diirranaa, oo noo ga taga roobabkan mahiigaannada ah, barafkayagan culus iyo duufaannadan iyo dabaylahan na burburiya.
Na ga guura illayn waad neceb tihiin muuqaalka macatabkayaga, oo waad dhibsataan jaraska kaniisadahayaga, oo waad necbaysataan mowlacyada baadderiyadayada, wuuna idinka xanaajiyaa ducaysigayaguye.
Maxaad na ga doonaysaan oo aad u guuri la dihiin?! Sow cuntadayada xaaraan u ma taqaannaan, oo dharkayaga sow nijaas u ma aragtaan, oo guryahayagu sow idin la ma aha meelo aan daahir ahayn? Maxaad u gu noqon la dihiin hilibkii xalaasha ahaa, dharkii daahirka ahaa iyo guryihii barakaysnaa? Waad na quudhsataan oo na gu sheegtaan qudhun, waayo wax aad qabtaan in aannaan hagaag u maydhan. Idin ku la murmi maynno ee sida ay idin la tahay baannu idiin xoojinaynnaa, markaa maxaad noo ga guuri la dihiin si aan taabashadayadu idiin nijaasayn?
Wax aad na gu sheegtaan dad aan hinaasin oo dan ka galin hab-dhaqanka iyo sumcadda dumarkooda iyo hablahooda, oo aannu oggolaannay danna ka yeelan arrimaha sharaf dhaca dumarka, iyo in aannaan taa wax qiimi ah siin, maalin ayay se na ga ga dayan doonaan gabdhihiinna iyo carruurtiinnu, oo ay sidayada noqon doonaan dad aan hinaasin. Markaa maxaad u la guuri waydeen hablihiinna iyo wiilashiinna iyo sharaftiinna iyo dhawrsanidiinna si aad u ilaalisaan oo aad sumcadda qoysaskiinna u ga dhawrtaan wasakhoobidda, noloshiinnana u ga badbaadisaan bahdilaadda?
Wax aad na gu eedaysaan in cidda dhaban na ga dhirbaaxda aannu dhabanka kale u duwno, oo aannu nahay dad hooseeya oo aan islaweyni aqoon, taana idinku diidi maynno. Laakiin ha illaawina dulqaadka in la is qaadsiiyo oo aad idinka iyo qoysaskiinnuba maalin uun na la mid noqon doontaan. Markaa maxaad noo ga guuri la dihiin inta aanay idinku dhicin cudurrada is oggolaanta, is cafinta iyo jacaylku?
La col baad tihiin iidahayaga, waad neceb tihiin taallooyinkayaga diiniga ah iyo taabashada astaamahayaga, wax aanad ku xidhiidhisaan shirki iyo diin la'aan. Waad diiddaan geedka kirismaska in aad guryihiinna dhigtaan, mana cuntaan ukunta iidda Istarka ee la midabeeyo. Waad xarrinteen isu hibaynta ubaxa, waanad gaalaysiiseen wax wal oo doofaar ku shuqul leh ama wax kale oo loo adeegsado. Markaa maxaad u gu noqon waydeen adhigiinnii iyo lo'diinnii iyo geelashiinnii horweynnada ahaa si aad u raacataan oo u maashaan oo hilibkooda xalaasha ah u cuntaan sida aad doontaan? Maad noo ga tagtaan xoolahayaga xaaraanta ah, hilibkooda iyo muuqaalkooda araggiinna u daran?
Calmaaniyada dalalkiinna waad la neceb tihiin, in la gu dhaqmana waad ka la dagaallantaan, laakiin wax aad naftiinna halis u soo galisaan in aad dhulkayaga timaaddaan oo calmaaniyadda hadhsataan. Judha aad sidaa salka u dhigataanba wax aad u dooddaan in aad heshaan waxtarka calmaaniyada iyo xuquuqda muwaaddinnimo oo buuxda iyo sinnaan iyo caddaalad.
Dalalkiinna waad ka mamnoocdeen in ay cid kale ka dhisato meel la gu cibaadaysto, waad u diiddeen in ay xabaalo ku yeelato, laakiin sidaa aad dhulkayaga cagaha u soo dhigtaanba wax aad dawladdayada wayddiisataan in ay masaajidyo idiin dhisto iyo in ay dhul qubuuro idiin noqda idin siiso.
Heesahayaga ma jeclidin fankayagana ka ma heshaan, waanad yastaan Opera-hayaga, guud ahaan dhaqankayagana waad diiddaan, laakiin waad ku dhimataan imaatinka dalalkayaga. Markaa maxaad u joogi waydeen halkii aad joogteen si ay naftiinna u ga baaqdaan waxan oo nacayb iyo xiqdi ah ee aad ilbaxnimadayada u qabtaan?
Waad mahadsan tihiin, oo waad ku mahadsan tihiin waxqabad wal oo aad na gu darsateen dhaqan, farsamo iyo aqoonba, laakiin imika na gu caawiya in aad ku noqotaan jannadii aad ka timaaddeen, halkaas baa aqoontiinna u baahane, waayo waannu idin soo tufnay.
Waxaa qoray dr Axmed Sarraaf, Kuwayd.
Nuqulka Carabiga ahi wax uu yaallaa barta
[Akhriso:-] Xusuusta Ereygii Halku-Dhegga Noqday "Fartayda Eeday" Ee Madaxweyne Biixi Ku Tiraabay Saacado Kadib
Heshiiskii uu Imaaraadku la Galay Yuhuuda oo Wejigiisii 1aad Noqday In UAE Uu Dalkiisa Ka Mamnuucay 13 Dal Oo Islaam ah
Dal Islaam Oo Hoy U Noqday Ka Ganacsiga Garoogada Heroin.
Agaasimaha Guud Ee Wasaaradda Waxbarashada Oo Ka Digay In Goobaha Waxbarashadu Ay Noqdaan Meherado Ganacsi.
Mudane Donald Trump Isaga Oo bilyaneer ah buu madaxweyne noqday.
Madaxweynaha Somaliland Iyo Weftigii Uu Hogaaminaayay Oo Dib Ugu Guryo Noqday Caasimada Hargeysa [ Muuqaal ]
Dood Culus Oo Ka Taagan Sharcinimada In Shaqaalaha Dawladdu Ku Milmaan Xubnana Ka Noqdaan Xisbiga KULMIYE Iyo Guddoomiya
[Daawo:-] Madaxweyne Muuse Biixi Oo Ka Hadlay Colaadaha Bariga Somaliland Kuso Noqnoqda & Doorka Xukuumaddisa.